ကမ်ဘာ့တနျဖိုးအမွငျ့ဆုံး မိုဘိုငျးဖုနျး ၁၀ လုံး - Thutazone
ယနခေ့တျေမှာတော့ မိုဘိုငျးဖုနျးတှဟော လူတှအေတှကျ မရှိမဖွဈ အရာတဈခုလို ဖွဈလာနပေါပွီ။ နညျးပညာမွငျ့ နောကျဆုံးပျေါ အကောငျးဆုံး မိုဘိုငျးတှရေဲ့ တနျဖိုးဟာ ဒျေါလာ ထောငျဂဏနျးသာ ရှိပမေယျ့ အလှနျ့အလှနျခမျြးသာသူတှကေတော့ ဒီထောငျဂဏနျးသာ တနျဖိုးရှိတဲ့ ဖုနျးတှကေို တနျဖိုးကွီးရတနာတှနေဲ့ အလှဆငျကာ ကိုငျဆောငျလရှေိ့ကွပါတယျ။ အခုမြှဝပေေးမှာတော့ ပိုကျဆံတတျနိုငျသူတှအေတှကျ သီးသနျ့ဖနျတီးထားတဲ့ ကမ်ဘာ့တနျဖိုးအမွငျ့ဆုံး ဖုနျး ၁၀ လုံးရဲ့ အကွောငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
10. VERTU SIGNATURE COBRA – USD 310,000
ဒျေါလာ ၃၁၀၀၀၀ တနျဖိုးရှိတဲ့ ဒီဖုနျးကိုတော့ ပွငျသဈနာမညျကွီး ဇိမျခံပစ်စညျးနဲ့ လကျဝတျရတနာကုမ်ပဏီ Boucheron က Limited Edition ဖနျတီးပွီး စုစုပေါငျး အလုံးအရအေတှကျ ၈လုံးသာ ထုတျလုပျထားတာဖွဈပါတယျ။ ဖုနျးကိုယျထညျတဈခုလုံးကိုတော့ ရှနေဲ့ပွုလုပျထားပွီး ဘေးဘောငျတှမှောတော့ မွှဟေောကျကွီးတှနေဲ့ အလှဆငျထားပါတယျ။ မွှဟေောကျရုပျတလြှောကျမှာတော့ မွ ၂ လုံး နဲ့ ပတ်တမွားအလုံးငယျပေါငျး ၄၃၉ လုံးကို ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။
9. GOLDVISH REVOLUTION – USD 488,150
ဆှဈဇာလနျ ဇိမျခံပစ်စညျးကုမ်ပဏီ GOLDVISH က ဖနျတီးထားတာဖွဈပါတယျ။ ဖုနျးတဈခုလုံးကိုတော့ ရှဖွေူ ၊ နီလာ ၊ စိနျ နဲ့ အကောငျးဆုံး သားရသေားတှနေဲ့ ဖနျတီးထားပါတယျ။ ဒါအပွငျ နာမညျကြျော နာရီဒီဇိုငျးပညာရှငျ Frederic Jouvenot ဖနျတီးထားတဲ့ တနျဖိုးကွီး Analog နာရီတဈလုံးကို ထညျ့သှငျးထားပါသေးတယျ။ ဒီဖုနျးအမြိုးအစားကို Limited Edition အနနေဲ့ စုစုပေါငျး အရအေတှကျအလုံး ၃၀ သာ ထုတျလုပျထားတာ ဖွဈပါတယျ။
8. GRESSO LUXOR LAS VEGAS JACKPOT – USD 1 MILLION
မိုဘိုငျးဖုနျး တဈလုံးအတှကျ ပထမဆုံးအကွိမျ ဒျေါလာသနျးနှငျ့ခြီ တနျဖိုးမွငျ့တကျစသေညျ့ မှတျတိုငျကို (၂၀၀၅)ခုနှဈကတညျးက တနျဖိုးကွီး မကျြမှနျ နဲ့ မိုဘိုငျးဖုနျးထုတျလုပျရေးကုမ်ပဏီ Gresso က စိုကျထူခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒီဖုနျးကို ဆှဈဇာလနျမှာ စတငျပွသရောငျးခခြဲ့တာဖွဈပွီး (၁၈၀)ဂရမျ အလေးခြိနျရှိ ရှသေားစဈစဈဖွငျ့ သှနျးလုပျ ဖနျတီးထားတာဖွဈပါတယျ။ ဖုနျးရဲ့ နောကျကြောဘကျမှာတော့ အာဖရိကတောနကျထဲက နှဈ ၂၀၀ကြျော သကျတမျးရှိ သဈပငျကရတဲ့ သဈသားနဲ့ ဖနျတီးထားပါတယျ။ ဒါအပွငျ ခလုပျတှထေဲမှာ နီလာတှကေို ထညျ့သှငျးထားပါသေးတယျ။
7. GOLDVISH LE MILLION – USD 1.3 MILLION
ဒျေါလာ ၁.၃သနျးတနျဖိုးရှိတဲ့ ဒီဖုနျးကိုတော့ ဆှဈဇာလနျ ဇိမျခံပစ်စညျးကုမ်ပဏီ GOLDVISH က ဖနျတီးထားတာဖွဈပါတယျ။ ဈေးအကွီးဆုံး မိုဘိုငျးဖုနျးအဖွဈ ဂငျးနဈစံခြိနျတငျခဲ့ဖူးတဲ့ ဖုနျးလညျးဖွဈပါတယျ။ ဖုနျးကိုယျထညျကို ၁၈ကာရကျရှိတဲ့ ရှနေဲ့ ဖနျတီးထားတာဖွဈပွီး ၁၂၀ ကာရကျရှိတဲ့ VVS-1 စိနျတှကေိုလညျး ထညျ့သှငျးအလှဆငျထားပါသေးတယျ။
6. DIAMOND CRYPTO SMARTPHONE – USD 1.3 MILLION
ဒီဖုနျးကတော့ တနျဖိုးကွီးပစ်စညျးတှကေို ဖနျတီးလရှေိ့တဲ့ သွစတွီးယနျး နာမညျကွီး ဒီဇိုငျနာ Peter Aloisson ရဲ့လကျရာဖွဈပါတယျ။ ဖုနျးကိုယျထညျတဈခုလုံးကို ရှဖွေူနဲ့ ပွုလုပျထားပွီး လိုဂိုကတော့ rose gold ဖွဈပါတယျ။ ဖုနျးရဲ့ အရှေ့ နဲ့ ဘေးဘကျတှမှော စိနျအလုံးပေါငျး ၅၀ ကိုထညျ့သှငျးထားပွီး အဲဒီထဲက ၁၀လုံးဟာ ရှားပါး အပွာရောငျစိနျတှဖွေဈပါတယျ။ ဒီဖုနျးမှာ အဆငျ့အမွငျ့ဆုံး လုံခွုံရေး စနဈမြားကိုပါ Ancort က ထညျ့သှငျးပေးထားတယျလို့ သိရပါတယျ။
5. IPHONE 3G KINGS BUTTON – USD 2.5 MILLION
ဒီဖုနျးကလညျး Iphone 3G ကို ဖနျတီးထားတဲ့ Peter Aloisson ရဲ့လကျရာပါပဲ။ ရှဖွေူ ၊ ရှဝေါ ၊ rose gold တှအေပွငျ စိနျပှငျ့ပေါငျး ၁၃၈ပှငျ့ နဲ့ ဖနျတီးထားတာဖွဈပါတယျ။ Home Button နရောမှာတော့ ၆.၆ကာရကျရှိတဲ့ အဖွူရောငျစိနျပှငျ့ကွီးကို မွှုပျနှံထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ ဒီစိနျကပဲ ဒီဖုနျးရဲ့ တနျဖိုးကို အဓိကမွငျ့တကျစတော ဖွဈပါတယျ။
4. GOLDSTRIKER IPHONE 3GS SUPREME – USD 3.2 MILLION
ဒီဖုနျးကိုတော့ အင်ျဂလနျရဲ့တနျဖိုးကွီး ဇိမျခံပစ်စညျးထုတျလုပျရေး ကုမ်ပဏီ Stuart Hughes က ဖနျတီးထားတာဖွဈပါတယျ။ ဖုနျးရဲ့ကိုယျထညျကိုတော့ (၂၇၁)ဂရမျ အလေးခြိနျရှိ ရှသေားစဈစဈဖွငျ့ သှနျးလုပျထားပွီး အရှဘေ့ကျမှာ စိနျပှငျ့ပေါငျး ၁၃၆ပှငျ့ လိုဂိုမှာ စိနျပှငျ့ပေါငျး ၅၃ပှငျ့ကို ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ Home Button နရောမှာတော့ ၇.၁ ကာရကျရှိတဲ့ လုံးဝနျးတဲ့စိနျပှငျ့ကို ထညျ့သှငျးအလှဆငျထားပါတယျ။
3. STUART HUGHES IPHONE4DIAMOND ROSE – USD 8 MILLION
ဒီဖုနျးကိုလညျး ဇိမျခံပစ်စညျးထုတျလုပျရေး ကုမ်ပဏီ Stuart Hughes ကပဲ ဖနျတီးထားတာဖွဈပါတယျ။ ဒျေါလာ ၈သနျးတနျတဲ့ ဒီဖုနျးကိုတော့ Rose Goldချေါ ပနျးရောငျဘကျသနျးနတေဲ့ ရှနှေငျ့ကွေးနီ သတ်တုစပျကို အသုံးပွုပွီး ကိုယျထညျကို တညျဆောကျထားပါတယျ။ ဒီဖုနျးရဲ့ Home Button မှာတော့ ၇.၄ကာရကျရှိတဲ့ ပနျးရောငျစိနျပှငျ့ကွီးကို မွုပျနှံထားပွီး ဖုနျးဘေးဘကျ ဘောငျတလြှောကျမှာတော့ ကာရကျ စုစုပေါငျး ၁၀၀ ခနျ့ အလေးခြိနျရှိတဲ့ စိနျပှငျ့ပေါငျး (၅၀၀) ခနျ့ကို ထညျ့သှငျးအလှဆငျထားပါတယျ။
2. BLACK DIAMOND IPHONE5– 15.3 MILLION
ဒီဖုနျးကိုလညျး ဇိမျခံပစ်စညျးထုတျလုပျရေး ကုမ်ပဏီ Stuart Hughes ကပဲ ဖနျတီးထားတာဖွဈပါတယျ။ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁၅.၃သနျးတနျတဲ့ ဒီဖုနျးကိုယျထညျတဈခုလုံးကို ရှနေဲ့ ဖနျတီးထားတာဖွဈပွီး Home Button မှာတော့ ၂၆ ကာရကျရှိတဲ့ အနကျရောငျစိနျကွီးတဈလုံးကို ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဘေးဘကျဘောငျတလြှောကျနဲ့ Apple လိုဂိုမှာ စိနျဖွူပှငျ့ငယျပေါငျး ၆၀၀ ကိုအလှဆငျထားပွီး လိုဂိုတဈခုတညျးမှာတငျ စိနျဖွူပှငျ့ငယျ ၅၃ခု ရှိနပေါတယျ။ ဒီဖုနျးကို အျောဒါမှာပွီး လကျဝယျပိုငျဆိုငျထားသူကတော့ တရုတျဘီလြံနာတဈဦးဖွဈပါတယျ။
1. FALCON SUPERNOVA IPHONE6PINK DIAMOND – USD 48.5 MILLION
ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံး မိုဘိုင်းဖုန်းကတော့ US နာမည်ကြီး ဇိမ်ခံပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ FALCON က ဖန်တီထားတဲ့ Iphone6 ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးအနေနဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၈.၅သန်း ရှိတဲ့ ဒီဖုန်း ရွှေ ၂၄ကာရက် အပြင် အလွန်ကြီးမားလှတဲ့ ပန်းနုရောင်စိန်ကြီးကို ဖုန်းရဲ့ ကျောဘက်အလယ်မှာ ထည့်သွင်းကာ အလှဆင်ထားပါတယ်။ ဖုန်းကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးကို ပလက်တီနမ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး အဆင့်မြင့်ဆုံးလုံခြုံရေးစနစ်ပါ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ အမျိုးအစားချင်းအတူတူ လိမ္မော်ရောင်စိန်နဲ့ Iphone6က ဒေါ်လာ ၄၂.၅ သန်းဖြစ်ပြီး အပြာရောင်စိန်နဲ့ Iphone6 ကတော့ ၃၂.၅ သန်းဖြစ်ပါတယ်။
Ref : luxhabitat
ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံး မိုဘိုင်းဖုန်း ၁၀ လုံး
ယနေ့ခေတ်မှာတော့ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေဟာ လူတွေအတွက် မရှိမဖြစ် အရာတစ်ခုလို ဖြစ်လာနေပါပြီ။ နည်းပညာမြင့် နောက်ဆုံးပေါ် အကောင်းဆုံး မိုဘိုင်းတွေရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ဒေါ်လာ ထောင်ဂဏန်းသာ ရှိပေမယ့် အလွန့်အလွန်ချမ်းသာသူတွေကတော့ ဒီထောင်ဂဏန်းသာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဖုန်းတွေကို တန်ဖိုးကြီးရတနာတွေနဲ့ အလှဆင်ကာ ကိုင်ဆောင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ အခုမျှဝေပေးမှာတော့ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်သူတွေအတွက် သီးသန့်ဖန်တီးထားတဲ့ ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံး ဖုန်း ၁၀ လုံးရဲ့ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်လာ ၃၁၀၀၀၀ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဒီဖုန်းကိုတော့ ပြင်သစ်နာမည်ကြီး ဇိမ်ခံပစ္စည်းနဲ့ လက်ဝတ်ရတနာကုမ္ပဏီ Boucheron က Limited Edition ဖန်တီးပြီး စုစုပေါင်း အလုံးအရေအတွက် ၈လုံးသာ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးကိုတော့ ရွှေနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီး ဘေးဘောင်တွေမှာတော့ မြွေဟောက်ကြီးတွေနဲ့ အလှဆင်ထားပါတယ်။ မြွေဟောက်ရုပ်တလျှောက်မှာတော့ မြ ၂ လုံး နဲ့ ပတ္တမြားအလုံးငယ်ပေါင်း ၄၃၉ လုံးကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
ဆွစ်ဇာလန် ဇိမ်ခံပစ္စည်းကုမ္ပဏီ GOLDVISH က ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းတစ်ခုလုံးကိုတော့ ရွှေဖြူ ၊ နီလာ ၊ စိန် နဲ့ အကောင်းဆုံး သားရေသားတွေနဲ့ ဖန်တီးထားပါတယ်။ ဒါအပြင် နာမည်ကျော် နာရီဒီဇိုင်းပညာရှင် Frederic Jouvenot ဖန်တီးထားတဲ့ တန်ဖိုးကြီး Analog နာရီတစ်လုံးကို ထည့်သွင်းထားပါသေးတယ်။ ဒီဖုန်းအမျိုးအစားကို Limited Edition အနေနဲ့ စုစုပေါင်း အရေအတွက်အလုံး ၃၀ သာ ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိုဘိုင်းဖုန်း တစ်လုံးအတွက် ပထမဆုံးအကြိမ် ဒေါ်လာသန်းနှင့်ချီ တန်ဖိုးမြင့်တက်စေသည့် မှတ်တိုင်ကို (၂၀၀၅)ခုနှစ်ကတည်းက တန်ဖိုးကြီး မျက်မှန် နဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Gresso က စိုက်ထူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖုန်းကို ဆွစ်ဇာလန်မှာ စတင်ပြသရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပြီး (၁၈၀)ဂရမ် အလေးချိန်ရှိ ရွှေသားစစ်စစ်ဖြင့် သွန်းလုပ် ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ နောက်ကျောဘက်မှာတော့ အာဖရိကတောနက်ထဲက နှစ် ၂၀၀ကျော် သက်တမ်းရှိ သစ်ပင်ကရတဲ့ သစ်သားနဲ့ ဖန်တီးထားပါတယ်။ ဒါအပြင် ခလုပ်တွေထဲမှာ နီလာတွေကို ထည့်သွင်းထားပါသေးတယ်။
ဒေါ်လာ ၁.၃သန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ ဒီဖုန်းကိုတော့ ဆွစ်ဇာလန် ဇိမ်ခံပစ္စည်းကုမ္ပဏီ GOLDVISH က ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးအကြီးဆုံး မိုဘိုင်းဖုန်းအဖြစ် ဂင်းနစ်စံချိန်တင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဖုန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းကိုယ်ထည်ကို ၁၈ကာရက်ရှိတဲ့ ရွှေနဲ့ ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီး ၁၂၀ ကာရက်ရှိတဲ့ VVS-1 စိန်တွေကိုလည်း ထည့်သွင်းအလှဆင်ထားပါသေးတယ်။
ဒီဖုန်းကတော့ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေကို ဖန်တီးလေ့ရှိတဲ့ သြစတြီးယန်း နာမည်ကြီး ဒီဇိုင်နာ Peter Aloisson ရဲ့လက်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးကို ရွှေဖြူနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး လိုဂိုကတော့ rose gold ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ အရှေ့ နဲ့ ဘေးဘက်တွေမှာ စိန်အလုံးပေါင်း ၅၀ ကိုထည့်သွင်းထားပြီး အဲဒီထဲက ၁၀လုံးဟာ ရှားပါး အပြာရောင်စိန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖုန်းမှာ အဆင့်အမြင့်ဆုံး လုံခြုံရေး စနစ်များကိုပါ Ancort က ထည့်သွင်းပေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီဖုန်းကလည်း Iphone 3G ကို ဖန်တီးထားတဲ့ Peter Aloisson ရဲ့လက်ရာပါပဲ။ ရွှေဖြူ ၊ ရွှေဝါ ၊ rose gold တွေအပြင် စိန်ပွင့်ပေါင်း ၁၃၈ပွင့် နဲ့ ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Home Button နေရာမှာတော့ ၆.၆ကာရက်ရှိတဲ့ အဖြူရောင်စိန်ပွင့်ကြီးကို မြှုပ်နှံထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဒီစိန်ကပဲ ဒီဖုန်းရဲ့ တန်ဖိုးကို အဓိကမြင့်တက်စေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဖုန်းကိုတော့ အင်္ဂလန်ရဲ့တန်ဖိုးကြီး ဇိမ်ခံပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ Stuart Hughes က ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ကိုယ်ထည်ကိုတော့ (၂၇၁)ဂရမ် အလေးချိန်ရှိ ရွှေသားစစ်စစ်ဖြင့် သွန်းလုပ်ထားပြီး အရှေ့ဘက်မှာ စိန်ပွင့်ပေါင်း ၁၃၆ပွင့် လိုဂိုမှာ စိန်ပွင့်ပေါင်း ၅၃ပွင့်ကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Home Button နေရာမှာတော့ ၇.၁ ကာရက်ရှိတဲ့ လုံးဝန်းတဲ့စိန်ပွင့်ကို ထည့်သွင်းအလှဆင်ထားပါတယ်။
ဒီဖုန်းကိုလည်း ဇိမ်ခံပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ Stuart Hughes ကပဲ ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်လာ ၈သန်းတန်တဲ့ ဒီဖုန်းကိုတော့ Rose Goldခေါ် ပန်းရောင်ဘက်သန်းနေတဲ့ ရွှေနှင့်ကြေးနီ သတ္တုစပ်ကို အသုံးပြုပြီး ကိုယ်ထည်ကို တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ဒီဖုန်းရဲ့ Home Button မှာတော့ ၇.၄ကာရက်ရှိတဲ့ ပန်းရောင်စိန်ပွင့်ကြီးကို မြုပ်နှံထားပြီး ဖုန်းဘေးဘက် ဘောင်တလျှောက်မှာတော့ ကာရက် စုစုပေါင်း ၁၀၀ ခန့် အလေးချိန်ရှိတဲ့ စိန်ပွင့်ပေါင်း (၅၀၀) ခန့်ကို ထည့်သွင်းအလှဆင်ထားပါတယ်။
ဒီဖုန်းကိုလည်း ဇိမ်ခံပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ Stuart Hughes ကပဲ ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅.၃သန်းတန်တဲ့ ဒီဖုန်းကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးကို ရွှေနဲ့ ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီး Home Button မှာတော့ ၂၆ ကာရက်ရှိတဲ့ အနက်ရောင်စိန်ကြီးတစ်လုံးကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘေးဘက်ဘောင်တလျှောက်နဲ့ Apple လိုဂိုမှာ စိန်ဖြူပွင့်ငယ်ပေါင်း ၆၀၀ ကိုအလှဆင်ထားပြီး လိုဂိုတစ်ခုတည်းမှာတင် စိန်ဖြူပွင့်ငယ် ၅၃ခု ရှိနေပါတယ်။ ဒီဖုန်းကို အော်ဒါမှာပြီး လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားသူကတော့ တရုတ်ဘီလျံနာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။